Iindaba - Luluphi udidi lwamalaphu?
Luluphi udidi lwamalaphu?
Into ebizwa ngokuba lilaphu ibhekisa kwizinto zeshiti ezenziwe ngemicu yelaphu. Amalaphu ngokubanzi anokuhlelwa ngokwendlela yokusebenzisa kunye nemveliso. Ngokwenjongo yelaphu linokwahlulwahlulwa ngokwamacandelo amathathu: impahla eyolukiweyo, amalaphu okuhombisa, amalaphu eshishini.
Impahla eyolukiweyo yempahla.
Impahla eyolukiweyo ibandakanya amalaphu ahlukeneyo elukiweyo asetyenziselwa ukwenza iimpahla, kunye nezinto ezahlukeneyo zempahla ezilukiweyo ezinje ngentambo yokuthunga, ibhanti e-elastic, ulwelo lwekhola, ulwelwesi, kunye neempahla ezilukiweyo ezilungisiweyo, iiglavu, iikawusi, njl.
Impahla yokuhombisa ibalasele ngakumbi kunamanye amalaphu ngokwendlela eyahlukeneyo yokwakheka, ipateni kunye nokuthelekiswa kombala, kwaye kunokuthiwa luhlobo lobuGcisa nezobugcisa. Impahla yokuhombisa inokuhlulwa ibe yimpahla yendlu, impahla elukiweyo kunye neempahla zangaphandle.
Izindwangu zorhwebo zisetyenziswa ngokubanzi kuluhlu olubanzi lweentlobo, ezinje ngelaphu elinoboya, ilaphu lompu, ilaphu lokucoca ulwelo, isikrini, inyathelo lokuthambisa, njl.
Oku kulandelayo ziimpawu ezineenkcukacha zamalaphu aqhelekileyo asetyenziswa:
1. Ilaphu lomqhaphu
Umqhaphu ligama eliqhelekileyo lazo zonke iintlobo zelaphu lomqhaphu. Isetyenziselwa ukwenza ifashoni, ukunxiba okungaqhelekanga, iimpahla zangaphantsi kunye neehempe. Ukulunga kwayo kulula ukuyigcina ifudumele, ithambile kwaye ikufutshane nomzimba, ukufakwa kokufuma, kunye nokungena komoya okuhle. Ububi bayo kulula ukuncipha, imibimbi, inkangeleko ayilunganga kwaye intle, ekunxibeni kufuneka ihlale iyintsimbi.
I-hemp luhlobo lwelaphu elenziwe nge-hemp, iflakisi, i-ramie, i-jute, i-sisal, ibhanana kunye nezinye iintsinga zezityalo ze-hemp. Ihlala isetyenziselwa ukwenza iimpahla ezingaqhelekanga nezisebenzayo, kwaye okwangoku, ikwasetyenziselwa ukwenza iimpahla eziqhelekileyo zasehlotyeni. Izibonelelo zalo ngamandla aphakamileyo, ukufuma kokufuma, ukuhambisa ubushushu, kunye nokuvumeleka komoya. Ububi bayo abonwabisi kakhulu ukunxiba, inkangeleko irhabaxa, iqine.
Isilika ligama eliqhelekileyo leendwangu ezahlukeneyo zesilika ezenziwe ngesilika. Njengekotoni, ineentlobo ezininzi kunye nobuntu obahlukeneyo. Ingasetyenziselwa ukwenza iimpahla ezahlukeneyo, ngakumbi iimpahla zabasetyhini. Izibonelelo zalo zilula, zilungile, zithambile, zigudile, zingena umoya, zinemibala, zityebile, zintle kwaye zinhle, zikhululekile ukunxiba. Ukusilela kwayo kulula ukushwabana, kulula ukufunxa, akunamandla ngokwaneleyo, kuyaphela ngokukhawuleza.
Uboya, obukwabizwa ngokuba buboya, ligama eliqhelekileyo lamalaphu enziwe ngeentlobo ezahlukeneyo zoboya kunye nekhesmere. Ihlala ilungele iimpahla ezisemthethweni neziphezulu ezifana nokunxiba, isuti, idyasi, njl. Iingenelo zayo kukushwabana okunganyangekiyo kunye nokunxiba okunganyangekiyo, ukuziva kwesandla esithambileyo, ubuhle kwaye bucacile, ilastiki, ubushushu obomeleleyo. Ububi bayo ikakhulu bubunzima bokuhlamba, abufanelanga ukwenza iimpahla zasehlotyeni.
Isikhumba luhlobo lwelaphu loboya bezilwanyana elenziwe ngosuki. Isetyenziselwa ukwenza iimpahla zefashoni nezasebusika. Inokwahlulwahlulwahlulwahlulwe yangamacandelo amabini: olunye lulusu, oko kukuthi, ulusu oluphathwe ngoboya obudlulileyo. Owesibini ngoboya, oko kukuthi, isikhumba esinoboya obenziwe ngebhanti. Izibonelelo zayo zilula kwaye zifudumele, zinhle kwaye ziyabiza. Ukungancedi kwayo kukuba kuyabiza, ukugcinwa kunye neemfuno zokonga ziphezulu, ke ayifanelekanga ukuba yaziwe.
6. Ifayibha yemichiza
Ifayibha yemichiza sisishunqulelo sefayibha yemichiza. Luhlobo lwelaphu elenziwe ngemichiza ephezulu yemolekyuli. Ngokubanzi, yahlulwe yangamacandelo amabini: ifayibha eyenziweyo kunye nefayibha eyenziweyo. Uncedo lwabo oluqhelekileyo ngumbala oqaqambileyo, ukuthamba okuthambileyo, i-draping, igudile kwaye intofontofo. Ukungancedi kwabo kukunxiba ukumelana nobushushu, ukumelana nobushushu, ukufuma nokufuma okungaginyisi mathe, kulula ukukhubazeka xa kusenzeka ubushushu, kwaye kulula ukuvelisa i-electrostatic. Nangona inokusetyenziselwa ukwenza iintlobo ezahlukeneyo zokunxiba, inqanaba lilonke alikho phezulu, kwaye kunzima ukufikelela kwiholo entle.
Ukudibanisa luhlobo lwelaphu elidibanisa ifayibha yendalo kunye nefayibha yemichiza kwindawo ethile, enokusetyenziselwa ukwenza iintlobo ezahlukeneyo zempahla. Izinto eziluncedo azipheleli ekufumaneni izibonelelo zekotoni, i-hemp, isilika, uboya kunye nefayibha yemichiza, kodwa zikwaphepha nokusilela kwazo kangangoko kunokwenzeka, kwaye ngexabiso eliphantsi kakhulu, ke iyathandwa.